कुन मन्त्रीले दाइजोमा के के पाए ? |
कुन मन्त्रीले दाइजोमा के के पाए ?
प्रकाशित मिति :2016-12-15 17:24:22
काठमाडौं । २९ मंसिरमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले प्रधानमन्त्री सहित २७ मन्त्री र चार राज्यमन्त्रीका सम्पत्ति सार्वजनिक गर्‍यो । मन्त्रीले पेश गरेका सम्पत्ति विवरणमा केही मन्त्रीहरूले दाइजो वा विवाहमा प्राप्त सम्पत्ति भनेर सम्पत्तिको विवरण बुझाएका छन् । यस्तो सम्पत्तिमा विशेषगरी सुन, चाँदी, हिरा र विभिन्न गरहगहना उल्लेख छन् । केहीले जग्गा समेत दाइजोमा पाएका छन् ।
सम्पत्तिको विवरण बुझाउनेमा माथिल्लो सूचीमा रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीको सम्पत्ति विवरणमा दाइजो बापत ६० तोला सुन र १५० तोला चाँदी पाएको उल्लेख छ । परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पत्नीका माइतीले इलाममा १० रोपनी जग्गा, झापा तोपगाछीमा पाँच विघा ४ कठ्ठा जमिन दिएको उल्लेख गरेका छन् । सो विवरण अनुसार उनले विवाहमा करिब ३० तोला सुन, १२ सय तोला चाँदी, हिरामोती र केही गरगहना समेत पाएका थिए ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्री सुर्यमान गुरुङले दाइजोबापत ताप्लेजुङमा साढे चार रोपनी जग्गा पाएको विवरण छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजीत श्रीपालीले पत्नीको माइतीबाट विवाहमा २ तोला सुन पाएको उल्लेख गरेका छन् ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्र कुमार कार्कीले छोराछोरीको मावलीबाट करिब ४ लाख रुपैयाँ पाएको उल्लेख गरेका छन् । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल दाइजोमा गरगहना पाएको उल्लेख छ ।
शान्ति तथा पुर्ननिर्माण मन्त्री सीतादेवी यादवले ५३ तोला सुन पैत्रिक सम्पत्ति, माइतीबाट पाएको आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेकी छन् । यसैगरि माइतीतर्फबाटै र छोराबुहारीको समेत १९२ तोला चाँदी सात थान हिराका औंठी रहेको उनको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ ।
सिंचाई मन्त्री दिपक गिरीको सम्पत्ति विवरणमा दाइजो बापत सुन, चाँदी, हिराको गहनालगायत पाएको उल्लेख छ । उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले पनि दाइजोबापत काठमाडौं भद्रवासमा ८ आना जग्गा पाएको विवरणमा उल्लेख गरेका छन् ।
यसैगरि स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा १६ तोला सुन, २०० तोला चाँदी दाइजोमा पाएको उल्लेख गरेका छन्। दाइजोमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री ह्दयराम थानीले पनि ६६ तोला सुनका गहना, तीन किलो चाँदीका गहना र भाँडाकुँडा पाएका छन्।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री श्रीप्रसाद जवेगुको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख १५ तोला सुन दाइजो र केही पैत्रिकबाट पाएको उल्लेख छ। कृषि विकास राज्यमन्त्री राधिका तामाङले पनि माइतीबाट ५ तोला सुन पाएको उल्लेख छ।
पुस एक गते शुक्रवार अद्यावधिक गरिएको